Reer Jowhar oo aad ula yaabban fal uu ku kacay maamulka Hirshabeelle
Home » WARARKA MAANTA » Reer Jowhar oo aad ula yaabban fal uu ku kacay maamulka Hirshabeelle	Reer Jowhar oo aad ula yaabban fal uu ku kacay maamulka Hirshabeelle
19/04/2017	462 Views Dadka ku nool magaalada Jowhar ayaa waxa ay maanta hadal-haayaan xarig uu maamulka Hirshabeelle kula maxay agaasimihii Isbitaalka Jowhar.
Xasan Mahad ayaa waxaa xabsiga u taxaabay ciidamo ka tirsan Hirshabeelle, waxaana wararka la helay ay sheegayaan in amarka xariggiisa uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle.
Xarigga ayaa ka dambeeyay markii uu maamulka Isbitaalku iska diiday fulinta amar ka soo baxay maamulka Hirshabeelle oo ku saabsanaa in la joojiyo shaqada ay hayso hay’adda INTERSOS oo iyadu maamusha isbitaalka Jowhar.
Isbitaalka Jowhar iyo hay’adda maamushaba waxa ay adeeg caafimaad u fidiyaan dhammaan dadka ku nool magaalada iyo deegaannada ku dhaw dhaw oo aan gooba caafimaad oo badan lahayn. Maamulka Hirshabeellana ma uusan sheegin sababta ku riixaysa in uu joojiyo shaqada ka socota Isbitaalka.
Previous: Dadkii ugu badnaa ee Soomaali ah oo Mareykanka laga soo celinayo.
Next: Dhegeyso: Xildhibaanno ka tirsan Hirshabeelle oo baaq culus diray